हाम्रो जित सुनिश्चित छ : केदार देवकोटा – Sadarline
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १० औं केन्द्रिय अधिवेशन २७ गतेदेखी नेपालगन्जमा जारी छ ।अधिवेशनमा अध्यक्ष उम्मेद्वारका प्रत्यासी केदार प्रसाद देवकोटा प्रतिनिधि विच आफ्नो कार्यकुशलता संगठनको हित र समग्र निजामती प्रशासन सुधारका लागि आफ्नो नेतृत्व अनिवार्य रहेको दावी गर्दछन्। विगत २५ वर्षदेखि निजामती कर्मचारी संगठनमा काम गरेको अनुभव र निजामती कर्मचारी संगठन भित्र व्यक्तिगत लाभका विरुद्ध,कर्मचारी हक हितका लागि सक्षम भएकै कारण मलाई सवै प्रतिनिधि साथिहरुको साथ ,सहयोग र समर्थनका साथ अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेको छु। परिणाम मेरो पक्षमा आउने निश्चित छ । घोषणा मात्र औपचारिकताका लागि हो । यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले देवकोटासँग कुरा गरेका छौं ।
तपाइको उम्मेद्वारी किन ?
राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै प्रशासनिक इकाइ तीन तहमा विभाजन भएको छ। एउटा केन्द्रीय तहको प्रशासन, अर्काे संघीय प्रदेश तहको प्रशासन र एउटा स्थानीय तहको प्रशासन,केन्द्रीय तहको प्रशासनलाई संघीय प्रशासन भन्छ र अहिले हामी सवै केन्द्रीय तहको प्रशासनका कर्मचारी हौं। कर्मचारीलाई तीन तहमा विभाजन गर्दा उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसमा मैले भूमिका खेल्नका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ। एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले मैले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिनु स्वाभाविक हो। अर्काे निजामती प्रशासनलाई मापदण्ड, ऐन नियम अनुसार संचालन गर्नको लागि मैले उम्मेद्वारी दिएको छु। त्यसको निष्पक्ष रुपमा व्यवस्थापन गर्न मेरो उम्मेद्वारी जरुरी छ भनेर सवै साथिहरुले भनिरहनु भएको छ ।
कर्मचारी संगठनको म वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो ।वरिष्ठ उपाध्यक्षले स्वतह दावी गर्ने कुरा त छँदैछ । विचमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्ष पाउनुपर्ने जुन अवस्था थियो,त्यो गएको ८ महिना यता नवनिर्वाचित र नवौं राष्टिय अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पुण्य ढकाल जो सीबीए अध्यक्षको रुपमा काम काज गरिरहनु भएको छ । उहाँले अध्यक्षवाट राजिनामा गरेर सिविएको केन्द्रीय अध्यक्षमा गैसकेपछि स्वत अध्यक्षको पद मैले पाउनुपर्ने थियो तर त्यतिखेर पनि म माथि अन्याय भयो र मैले अध्यक्ष पाइन र अहिले राष्टिय अधिवेशनवाट जनमतकै आधारमा अध्यक्ष हुने योजनाका साथ मेरो उम्मेदवारी हो र मेरो अधिकार पनि हो वरिष्ठ उपाध्यक्षको नाताले,मेरो अध्यक्ष लड्ने वाहेक अरु विकल्प पनि छैन।
महाधिवेशनमा नारा जुलुस गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो आखिर किन ?
यो हाम्रो रहरको कुरा थिएन, संगठनको केन्द्रीय वैठकमा सरसल्लाह गरेर प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक मनोनित गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने त्यो भएन र विभिन्न क्षेत्रवाट आएका सिफारिसहरुलाई छलफल गर्ने कुरा हँुदा हँुदै एकतर्फी तरिकाले ६६ जना प्रतिनिधिहरु मनोनित गरियो। जसको कारणवाट यो अधिवेशनमा ६६ जना एकतर्फी रुपमा आउदा नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरालाई औचित्यनै समाप्त हुने स्थिति आयो, किनकी एकपक्षिय प्रतिनिधि ल्याएर दुई पक्षको उम्मेद्वार हामी खडा भैसकेको अवस्थामा एउटा पक्षको मात्र समर्थन गर्ने प्रतिनिधि खडा भैसकेपछि त्यसको विवाद हुनु स्वाभाविक हो। केन्द्रीय कमिटीमा पनि विवाद भयो त्यो उद्घाटनको कार्यक्रममा पनि आयो । अहिले सहमती भैसकेर सवै टुङ्गीसकेको छ। पार्टी सचिव तथा मोर्चा संगठन प्रमुख गोकर्ण विष्ट,पेसागत महासंघको अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल र हामी सवै वसेर छलफल गरेका छौ ।सवै समस्या समाधान गरेका छौ । सवै मनोनित प्रतिनिधिहरु र पर्यवेक्षकहरु सवैलाई मनोनित नगर्ने सहमती गरेका छौ र वन्दशत्र सुरु भएको छ ।
महासचिवलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्ष मानेर काम गर्दा अफ्ठेरो लागेन ?
केही समय त स्वाभाविक लागेन, तर संगठनको लागि व्यक्तिगत अफ्ठेरोलाई लुकाएर अघि बढँे । राजनीति यस्तै हुम्दो रै , आफुभन्दा जुनियर मान्छे पनि माथिल्लो पदमा जांन्छ भन्ने हिसावले राजनैतिक भित्र यस्तो पनि हुन्छ भनेर सोच्नु पर्दो रै’छ निष्ठाको राजनीति गर्दा र निष्ठाको संगठन निर्माण गरेर अघि वढ्दा सवैकुरालाई सम्हालेर र सहेर आइयो,मैले सहज लिए पनि सम्पूर्ण सङगठन र शुभेच्छुक साथिहरुलाई नराम्रो र नमिठो लागेको कुरा उहाँहरुले वताइरहनुभएको छ।
प्रतिनिधि व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?
जिल्ला जिल्लामा र मन्त्रालयमा अधिवेश भएर प्रतिनिधिहरु आउनुभएको छ। कोही मलाई शुभेच्छा राख्ने आउनुभएको छ । कोहि उहाँलाई शुभेच्छा राख्ने आउनुभएको छ। सवै संगठनमा इमान्दारिता राख्ने मान्छेहरु प्रतिनिधि बनेर आउनुभएको छ । त्यसको हिसाव किताव मैले गरेको छैन त्यो निर्वाचनको परिणामले गर्छ ।
निर्वाचनको परिणाम तपाईको पक्षमा आउनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनुपर्ने दावी गरिराखेको छु । किनभने अहिलेको अध्यक्ष एकपटक अध्यक्ष भैसक्नु भएको छ । उहांले यसपटक मलाई छोडेर सहमतीको बाटो खोल्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।भएन भने स्वस्च्छ प्रतिष्पर्धा हुन्छ र त्यसभित्र एउटा परिणाम आउछ, म चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु । मैले कर्मचारी संगठन भित्र आजसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा पराजित भएको छैन केन्द्रीय कमिटीमा मात्र म पाँचपटक निर्वाचित भएको छु । अव निर्वाचित हुँदा म छैठौ पटक हुन्छु ।
तपाइहरुले पार्टी अध्यक्षलाई कार्यक्रममा बोलाउनुभयो ? एयरपोर्टमा स्वागत सम्म गर्न जानुभएन ?
यो हाम्रो कमी कमजोरी भयो ।त्यो कुरा हाम्रो नेतृत्वले जिम्मा लिने कुरा पनि हो ।पार्टीको अध्यक्ष आउँदा संगठनको अध्यक्षनै त्यहाँ लिन जानु पार्ने हो । उहाँले म जान भ्याएन तपाइ जानु भनेको भए पनि म जाने थिएँ । मलाई निर्देशन पनि भएन उहाँ पनि जानुभएन मलाई यस विषयमा खल्लो लागेको छ ।
प्रतिनिधिले तपाइलाई किन भोट दिने
म उदण्ड र अराजक व्यक्ति होइन र अराजक गतिविधि गर्दैन भन्ने साथिहरुले वुझ्नुभएको छ। मनोनित प्रतिनिधि छनोट हँुदा हामीले केही विरोध जनाएका हौं। त्यो स्वभाविक ढंगले विरोध जनाएका हौं अन्यथा अधिवेशन नै हुन नदिने हाम्रो योजना होइन यो अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न र राम्रो निष्पक्ष वनाउनका निमित्त हाम्रो विरोध हो ।
तपाई नेतृत्वमा पुगेपछि के गर्नुहुन्छ ?
एउटा निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउन पहल गर्ने छु,अर्को कुरा सिविएमा गएका केन्द्र तह र जिल्लाका पदाधिकारीहरुको सम्मान, सहयोग र समन्वय गर्न म लागि पर्ने छु अहिले जुनकुरा भैरहेको छैन। म अध्यक्षमा निर्वाचित भैसकेपछि सिविएको पधादिकारीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै उहांहरुलाई राम्रो समन्वयका साथ सार्वजनिक प्रशासन भित्र देखेका समस्या समाधान गर्न, कर्मचारीका हक हितका पक्षमा काम गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने छु ।
साथीहरु देशभर विभिन्न जिल्लावाट आउनु भएको छ । प्रतिनिधि व्यवस्थापनमा कमजोरि भएको छ । केन्द्रवाट प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक मनोनित गरिएको थिएन, एक हप्ता अघिवाट छनोट गरेर साथिहरुलाई खवर गर्नुपथ्यो । दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ हामीले केन्द्रवाट निर्णय गर्न सकेनौं र जानाकारी गर्न सकेनौं त्यसले गर्दा व्यवस्थापनमा कम्जोरी भएको छ यसको जिम्मा नेतृत्वले लिनु पर्छ । ६६ जना मनोनयनको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो तर करिव ४ सय जना प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक वाहेक आउनु भएको छ । सवै साथिहरु यस अधिवेशनलाई न्यायको अधिवेशन वनाउन लाग्नुहुनेछ, संगठनमा हुँदै आइको अन्याय, एकलौटी निर्णय र अत्याचारको विरुद्ध लड्दै न्याय र समानताका लागि वहाँहरु लाग्नुहुने छ ।
सदरलाइनडटकम २९ मंसिर, नेपालगन्ज : नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १० औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा कर्मचारीका नेता भन्दा पार्टीका नेतालाई बढी चुनाव लागेको छ । नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्यदेखि यस क्षेत्रका जिल्ला अध्यक्ष, पदाधिकारीहरुको निर्वाचनस्थल सिद्धार्थ कटेज र होटलहरुमा प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि जोड बल गरिरहेका छन् । कतिपय नेताहरु अधिवेशनस्थल […]
२३ कार्तिक २०७६, शनिबार १६:१०
११ चैत्र २०७६, मंगलवार १४:५४
जहाज नउडेपछि सुत्केरी र बृद्धबृद्धा अलपत्र
२ मंसिर २०७४, शनिबार १७:५३